Ukufakwa kunye nokugcinwa kweTyhuna yePlate yeCompost Turner
Utyekelo lokuSila Isahlukanisi solwelo oluqinileyo
Isitya setyathanga umjikelo ujike ikhawulezisa inkqubo yokubola kwenkunkuma yendalo. Kulula ukusebenza kwaye inentsebenzo enkulu, ke esi sixhobo somgquba sisetyenziswa ngokubanzi hayi kwizityalo zokuvelisa isichumisi, kodwa nakwicomposting yefama.
Uvavanyo ngaphambi kokwenza uvavanyo
◇ Jonga ukuba indawo yethu yokuthambisa ayithambisanga ngokwaneleyo na.
The Jonga umbane wombane. Umbane olinganisiweyo: 380v, ukwehla koxinzelelo akufuneki kube ngaphantsi kwe-15% (320v), kungabikho ngaphezulu kwe-5% (400v). Kanye ngaphaya koluhlu, ukuqhuba akuvumelekanga.
Whether Jonga ukuba uqhagamshelo lweemoto kunye nezinto zombane zikhuselekile, kwaye uyisuse imoto ngeengcingo ukuqinisekisa ukhuseleko.
Jonga ukuba onke amalungu kunye neebholithi eziqhagamshelekayo ziqinile na. Nceda uqinise ukuba zikhululekile.
Jonga ubude beemfumba.
Ukuqhuba uVavanyo lokuSebenza ngaphandle koMthwalo
Ukubeka izixhobo zokugalela umgquba iyasebenza. Misa ukujika komgquba ngoko nangoko xa ujikelezo lujikile, emva koko utshintshe indlela ejikayo yokuxhuma kwinqanaba lesithathu. Ngexesha lokusebenza, mamela ukuba isinciphisi sinesandi esingaqhelekanga, sichukumise iqondo lobushushu lokujonga ukuba sikuluhlu lobushushu, kwaye siqwalasele ukuba ngaba kukho ukungqubana phakathi kwentsimbi yokuxuba i-helical kunye nomphezulu womhlaba.
Ukuqhutywa kovavanyo kunye noMthwalo
① Qalisa i Umgquba ojikajikajika umgudu kunye nempompo hydraulic. Ukubeka ipleyiti yomxokelelwano ngokucothayo ukuya ezantsi kwitanki yokubila, uhlengahlengisa indawo yeplate yetyathanga ngokungqinelana nokucaba komhlaba: gcina i-compost Turner blades 30mm ngaphezulu komhlaba xa impazamo yomdibaniselwano yomgangatho womhlaba ingaphantsi kwe-15mm. Ukuba ingaphezulu kwe-15mm, ezo blade zinokugcina kuphela i-50mm ngaphezulu komhlaba. Ngexesha lokugalela umgquba, xa iincakuba zibetha umhlaba, ukuphakamisa ipleyiti yetyathanga ukuthintela ukonakala kuyoizixhobo zokuguqula umgquba.
Ngexesha lonke lokuqhutywa kovavanyo, jonga ukuhanjiswa kwezixhobo zomgquba ngokukhawuleza xa kukho isandi esingaqhelekanga.
Whether Jonga ukuba ngaba inkqubo yolawulo yombane isebenza ngokuzinzileyo na.
Imicimbi yokuqwalaselwa kwityathanga lokuSebenza kweCompost Turner
Abasebenzi kufuneka bahlale kude nezixhobo zokwenziwa komgquba, ukuthintela iingozi. Ukujonga ujikeleze ujikeleze umgquba ngaphambi kokuwusebenzisa.
▽ Kwimveliso, ukugcinwa nokuzaliswa kweoyile yokuthambisa akuvumelekanga.
Ukusebenza ngokungqongqo ngokungqinelana neenkqubo ezimiselweyo. Akuvunyelwe ngokungqongqo ukusebenza kwelinye icala.
Abasebenzisi abangenazakhono abavumelekanga ukuba basebenzise umatshini. Kwiimeko zokusela utywala, ukungonwabi emzimbeni okanye ukuphumla kakubi, abaqhubi akufuneki basebenzise i-helix compost Turner.
Zonke iindlela zokujika kwe Window kufuneka zibekwe emhlabeni ngenjongo yokhuselo.
▽ Umbane kufuneka unqunyulwe xa kufakwa indawo yesilayidi okanye intambo
Must Kufuneka kuthathelwe ingqalelo ukuqaphela nokukhusela isilinda esisezantsi kakhulu ukuba singonakalise iitsali ezijikayo xa kubekwa ipleyiti yetyathanga.
Izinto zokuhlola ngaphambi kokuqhuba
● Qwalasela ukuba zonke izinto zokubopha izinto zikhuselekile na, kwaye ngaba ukucocwa kwepleyiti yamacandelo okuhambisa kufanelekile. Ukucoca okungafanelekanga kufuneka kulungelelaniswe ngexesha.
● Qingqa ibhotolo kwii-asi zeebheringi kwaye ujonge inqanaba leoyile yebhokisi yebhokisi kunye netanki le-hydraulic.
● Qiniseka ukuba uqhagamshelo ngocingo lukhuselekile.
Ukugcinwa kwexesha lokuphumla
Ukususa iintsalela kumatshini nakwindawo ezingqongileyo
Ub Ukuthambisa onke amanqaku okuthambisa
Izinto zolondolozo lweveki
● Ukujonga ioyile yebhokisi yegiya kwaye wongeze ngokwaneleyo ioyile yegiya.
● Ukujonga abafowunelwa kulawulo lwekhabhinethi. Ukuba yonakele, yitshintshe ngoko nangoko.
● Ukujonga inqanaba leoyile yebhokisi ye-hydraulic, kunye nemeko yokutywinwa konxibelelwano lwamajelo eoyile. Ukutshintsha amatywina ngexesha elifanelekileyo xa i-oyile ivuza.
Izinto zokuhlola ezenziwa rhoqo
Ukujonga iimeko zokusebenza kwesinciphisi semoto. Ukuba kukho nayiphi na ingxolo engaqhelekanga, okanye ukufudumeza, yima ujonge umatshini kwangoko.
◇ Ukujonga iibheringi ukuba azonakalanga na. Iibheringi ezigugileyo kufuneka zitshintshwe.
Iingxaki eziqhelekileyo kunye neendlela zokujongana neengxaki
Iindlela zokusombulula ingxaki
Uluhlu lwempahla eluhlaza lukhulu kakhulu Ukususa umaleko ongafunekiyo
Imiphanda neencakuba kakhulu zikhubazekile
Ukulungisa iincakuba kunye nemingxunya
Izixhobo ezonakalisiweyo okanye ezinamatheleyo
Ngaphandle komzimba ongaphandle okanye
Isinciphisi ngengxolo okanye umkhuhlane
Kukho eminye imicimbi kwi
Ukucoca yonke eminye imicimbi
Isinciphisi ngengxolo okanye ubushushu obuphezulu
Ukungabikho kweoyile yokuthambisa
Ukongeza ioyile yokuthambisa
Ubunzima okanye ukusilela kwi
ujonge imoto, ehamba nokubhabha
Ukugqithisa okanye ukonakalisa kakhulu
Shaft shaft ukuba baphambuke
Ukususa okanye ukufaka endaweni entsha
Umbane uphantsi kakhulu okanye uphezulu kakhulu
Ukuqalisa kwakhona ukujika komgquba
emva kwamandla ombane aqhelekileyo
Ukunciphisa ukunqongophala kweoyile okanye umonakalo
Ukujonga isinciphisi ukuze ubone
izixhobo azikwazi ukusebenza
Ukujonga ukuba ngaba umbane
Ukukhawulezisa unxibelelwano ngalunye